musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Russia Nhau » Vanhu veAmerica vakanyevera nezvevose vanoenda kuRussia
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Russia Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kodzero Dzevanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Zano idzva rekuAmerica rekufambisa, rakapihwa neMuvhuro, rinopa Russia iro rakaenzana njodzi senge Afghanistan, Uganda neSyria.
Vagari vemuUS vayambira kuti varege kuenda kuRussia chero zvodii
Vanhu vemuAmerica vachinyatsopa zano pamusoro pekushanyira kumatunhu ekumaodzanyemba eRussia seChechnya uye vakapokana neCrimea.
Vakuru veUS vanonyevera pamusoro pekufamba nekuda kwe "kushungurudzwa nevakuru vezvekuchengetedza hurumende yeRussia".
The United States Dhipatimendi reHurumende yambira vagari vemuUS kuti vadzivise kuenda kuRussia chero zvodii, vachinyevera kuti vanhu vekuAmerica vanogona kubiwa, kusungwa, kutambudzwa nekuiswa mutirongo nemhosva dzekunyepedzera.
Zano idzva rekuAmerica rekufambisa, rakapihwa neMuvhuro, rinopa Russia iro rakaenzana njodzi senge Afghanistan, Uganda neSyria. Zvakare nekuyambira zvakanyanya nezve kushanya kumatunhu ekumaodzanyemba eRussia seChechnya uye nharo dzeCrimea, vagari vemuUS vava kuudzwa kuti vadzivise Russia zvachose.
Chirevo ichi chinodoma "hugandanga" sechimwe chikonzero chevashanyi veUS kuti vasiye Russia.
Pamusoro pezvo, vakuru veUS vanonyevera pamusoro pekufamba nekuda kwe "kushungurudzwa nevakuru vezvekuchengetedza hurumende yeRussia" uye "nekumanikidza kutevedzera mutemo wemuno." Vakuru vanoyambira kuti "mhosva dzekunyepedzera" dzakapihwa vanhu vekuAmerican, uye kuti vashandi vezvitendero, pamwe nevashandi vehurumende, vanogona kuve panjodzi.
Panguva imwecheteyo, chipangamazano chitsva chekushambadzira cheWashington chinodudza kugona kwayo kushoma kupa rutsigiro kuvagari vekuUS kubva kumumiriri wayo muMoscow. Muna Kubvumbi, mamishinari akazivisa kuti yaizodzikisa huwandu hwevashandi neinosvika makumi manomwe neshanu muzana mushure mekurambidzwa neRussia kubva kunoshandisa vanhu vemo sechikamu chemutemo wakasainwa naPutin mukupindura "zviito zvisina hushamwari," mitemo yakatemerwa neWashington.
Nekuda kweizvozvo, mumiriri weUS muRussia hauchazopi "mabasa enguva dzose, Consular Reports yekuzvarwa kunze kwenyika, kana kumutsidzira mabasa epasipoti yeramangwana rinotaridzika," nhume dzayo dzakadaro. Muna 2018, iyo US yakavhara mumiriri wayo muSt Petersburg uye, muna Zvita wegore rapfuura, yakavharira mahofisi ayo muUral guta reEkaterinburg uye Far East guta guru reVladivostok. Sarudzo, iyo Washington yakati yakauya sechikamu chekupokana pamusoro pevamiriri, yakasiya America isina vamiriri kuRussia kunze kweMoscow.